कोल्टीमा डेढ साताका लागि मात्र खाद्यान्न विक्री बन्द, चामल अभाव नभएको दाबी « Drishti News
कोल्टीमा डेढ साताका लागि मात्र खाद्यान्न विक्री बन्द, चामल अभाव नभएको दाबी
बाजुरा ३१ जेठ । बाजुरा जिल्लाको कोल्टीमा रहेको खाद्य डिपोले जेठ २१ गतेदेखि खाद्यान्न विक्री वितरण बन्द गरेको छ । डिपोमा रहेको मौज्दात चामल सकिएपछि वितरण बन्द गरिएको कोल्टी डिपो प्रमुख नवीनप्रसाद आचार्यले बताएका छन् ।
कोल्टी क्षेत्रका लागि स्वीकृति भएर आएको सात हजार क्विन्टल चामलमध्ये सबै विक्री भएर ६ सय क्विन्टल चामल मात्र मौजाद रहेको छ । नयाँ आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृति नआएको र बाँकी रहेको चामल आपतकालिन अवस्थामा चाहिने भन्दै डिपोले विक्री गर्न बन्द गरेको हो । आर्थिक वर्षका लागि आएको र वितरण अनुमति आएको जति खाद्यान्न मध्ये दुई हजार पाँच सय ८५ क्विन्टल विक्री गरेर सकिएकाले थप डिपोमा रहेको चामल विक्री वितरण गर्न केन्द्रको अनुमति चाहिने भएकाले विक्री बन्द गर्नु परेको आचार्यले जानकारी दिएका छन् ।
हाल डिपो केन्द्रमा ६५७ क्विन्टल खाद्यान्न मौजाद रहेको छ । केन्द्रबाट अनमति नआएसम्म र थप ढुवानीको ग्यारेन्टी बारे निश्चित नभएसम्म हप्तादिन विक्री बन्द गर्ने डिपोले सूचना जारी गरेर जानकारी गराएको छ । असार १ गतेबाट पुनः डिपोबाट खाद्यान्न विक्री गर्ने डिपो शाखाका प्रमुख आचार्यको भनाई रहेको छ ।स्वीकृत भएर आएको चामलको सकिएपछि कोल्टी क्षेत्रमा चामलको अभाव हुने देखिएको छ ।
तर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी बाजुराका प्रमुख मेघराज ओझाले भने खाद्यन्नको समस्या नहुने बताएका छन् । थप खाद्यन्नका लागि प्रक्रिया केन्द्रमा पठाइ सकिएकोले तत्काल वितरण सुरु हुने र ढुवानी पनिसँग सँगै गरिने हुँदा अभाव नहुने बताएका छन् । ओझाले चामल विक्री बन्द हुने वित्तिकै खाद्यन्न संकट नहुने बताएका छन् ।
उसो त कोल्टी बजारका व्यापारीसँग पनि मौजाद रहेको छ । मौजाद गरिएको खाद्यन्न पनि व्यापारीले महँगो मूल्यमा कालोबजारी गर्ने भएपछि स्थानीय खाद्यन्न कै चामलको भरमा पर्ने गरेका छन् । २ हजार क्वीन्टल थप खाद्यन्नका लागि माग डिपोले गरिसकेकोले समस्या नहुने बताईएको छ ।
क्वारेनटाइनमा बसेकी गर्भवतीले जडिबुटी खापछि रक्तस्राब
बुढीगंगा नगरपालिका २ बसन्त आधारभुत विद्यालयमा बसेकी १६ बर्षकि गर्भवती महिलाले कोरोना ठिक हुन्छ भनेर गुज्रो नामक जडीबुटी खाएकि छन् । ५ महिनाकी गर्भवती लाई आरडिटि चेक गर्दा पोजेटिभ देखिएको थियो ।
प्रतिरक्षात्मक शक्ति बढाउन र कोरोना बाट बच्नका लागि गाँउबाट गुज्रो नामक जडीबुटी मगाएर खाएको ति गर्भवतीले बताएकी छन् । त्यो खाइसकेपछि तल्लो पेट दुख्ने रक्तस्राव भइरहेको उनले बताएकी छन् । उपचारमा खटिएकि स्वास्थ्यकर्मी आशा थापाले भनिन्, उनलाई अहिले खतराको लक्षण देखा परेको छ ।
पेट दुख्ने रक्तस्राब भइरहेको छ, पिसाब लाग्ने जस्तो हुने तर पिसाब नहुने रहेको छ, जडीबुटी खाएपछि उनीमा समस्या आएको थापाले बताएकी छन् । कुन कारणले हो थाहा भएन तर जडीबुटी खाएपछि समस्या आएको हो थापाले भनिन् ।
शुक्रवार राति जडीबुटी खाएपछि ति गर्भवतीमा रक्तस्राब हुन शुरु भएको हो, जिल्ला अस्पतालको डाक्टरको सल्लाहमा औषधि दिएको छ, अबस्था जटिल रहेको स्वास्थ्यकर्मीले वताएका छन् । उनको ८ जनाको परिवार भारतबाट १४ गते क्वारेनटाइनमा पुगेका थिए । स्वास्थ्य कार्यलय बाजुराका प्रमुख दयाकृष्ण पन्तले भने जडीबुटी खाएपछि गर्भवतीमा खतराको लक्षण देखा परेको वताएका छन् ।
आयुर्वेद चिकित्सक डा. सत्यराज जोशिले भने यो जडीबुटीले यस्तो नहुनु पर्ने हो भन्दै कुनै अन्य कारणले यस्तो भएको हुन सक्ने वताएका छन् । अर्काे खाने मात्रा पनि कति ? कसरी ? भन्ने हो, यो जडीबुटीले त्यस्तो असर नपार्ने जोशि बताँउछन् ।
ति गर्भवती महिलाको श्रीमान भन्दा बाहेक ८ जनालाई आरडिटी पोजेटिभ देखा परेको छ । तिनिहरु अझै क्वारेनटाइनमा बस्नु पर्ने भएको छ । एकातिर क्वारेनटानको बसाई अर्को तिर रक्तस्राबले स्वास्थ्य अबस्था जटिल बन्दै गएको छ । बाजुराका क्वारेनटाइनमा २० जना गर्भवती तथा सुत्केरी रहेका छन् । बसाई ब्यबस्थापन राम्रो नहुदा जोखिममा रहेका छन् ।
बडिमालिका नगरपालिका वडा न २ भौनेरामा रहेको सत्यवादी माध्यामीक विद्यालयको क्वारेन्टाइनमा एक युवकले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेमा बडिमालिका नगरपालिका वडा न २ माझि गाउँका बर्ष ४५ का युबक रहेका छन् । उनी २ दिन अगाडी मात्र भारतबाट आएर क्वारेन्टाइनमा बसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायव उपरिक्षक टंक प्रशाद भट्टराईले बताएका छन् । के–कति कारणले आत्महत्या गरेको हो भन्ने कुरा अनुसन्धानपछि मात्र जानकारी हुने प्रहरी प्रमुख भट्टराईले बताएका छन् ।
थप अनुसन्धानका लागि प्रहरी निरीक्षक दान रोकायाको नेतृत्वमा घटना स्थल गईसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले जनाएको छ । बडिमालिका २ माझीगाउँ घर भएका युवक घाटीमा डोरी लगाएर आत्महत्या गरेको बुझिएको छ । शुक्रबार राति ८ः३० बजेतिर डोरीको पासो लगाएर झुन्डिएको अवस्थामा उनीसँगै बसेका मान्छेले फेला पारेको प्रहरीको श्रोतले जनाएको छ । अहिले त्यहाँ १६ जना क्वारेन्टाइनमा बरिहेका छन् । जेठ २७ गते गौरीफन्टा नाका भएर २८ गते बाजुरा पुगेको जनाएको छ । ४ बर्ष भारतमा बसेर २ दिन अगी घर नजिककै क्वारेन्टाइनमा बसेका थिए ।
टेक्सी सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन
काठमाडौं, २४ असार । संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले ट्याक्सी सञ्चालनका लागि व्यववस्था मिलाउन सरकारलाई
दुई औषधि बिक्रीवितरणमा रोक
काठमाडौं, २४ असार । न्यून गुणस्तरको रहेको भन्दै दुई प्रकारका औषधिको बिक्रीवितरणमा रोक लगाइएको छ